Abesifazane abaningi bazibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuba uthole ukuthi yini oyithandayo guys. Yenza kube lula kakhulu. Bukelani nje ngayekwenzile futhi ukuthinta. Ziningi izinto ezingenza ukutshela, futhi izenzo zakhe. Kulesi sihloko uzokwazi ukuthola impendulo yombuzo kanjani ukuthola ukuthi yini oyithandayo guys. Asiqale:
1. Uma une lonke naye enkampanini eyodwa, kuyoba njalo abafuna ubheka. Ngesikhathi esifanayo, etshela abanye anecdote, ekupheleni into yokuqala ubheka, ukuze ubone ukuthi usabela.
2. Cabanga indlela ukuthola ukuthi yini oyithandayo guys? Beka ingubo ukukhanya ngosuku cool. Uma ungeyena nandaba kuye, kuba nakinet saziso emahlombe lakho elingenamikhono yakho noma ibhantshi.
3. Uma ngokuvamile ulungisa izinwele zakhe noma izingubo, kusho ukuthi afuna ukubheka emehlweni akho ezikhangayo.
4. Uma kuwukuthi athutha iphindwa izenzo zakho: emphethweni izandla zakhe, njengawe, noma elungisa izinwele - ke kusho ukuthi unganakile ofuna ukujabulisa.
5. Uma ukhathazekile, kodwa kulula kakhulu ukuqaphela ngu liphindelela ezimazombe yini noma ukuthuthumela izandla, wabe obuswa "ku hook".
6. Uma ukhuluma kuwe, ngokubeka phambili emlenzeni owodwa, lesi senzo ekubonisa zona njengoba into ukuthi unesithakazelo.
7. nalapho yena esebona kuwe, uyoba into kakhulu kakhulu batshele abangani babo, noma bavalelwe ngokushesha, ngakho asikho obakhathalelayo kuye. Futhi uma noma ubani guys ukuba sikhulume kini, uyozama ukukukhipha ngesikhathi esisodwa.
8. Uma ukukhuluma nawe, nguye sezinzwa noma ngisho wakhuluma - ke kusho ukuthi ngempela onjengaye.
9. Uma yena wasukuma futhi, njengoba abangu welula umzimba wakhe kuze ke, yena ubonisa izinga nokuziqhenya kwakhe yokuthi kungaba eduze intombazane.
10. Uma ngempela nsizwa, yena uzophawula ushintsho kancane e ukubukeka kwakho: kwekhanda, izingubo.
11. Uma, ngemuva kokufunda mayelana oyithandako, uzobona zama ukuyifunda kanye nawe: baqale ukulalela umculo okuthandayo noma ukwenza izinto ezifanayo eziyizinhlupheko ezemidlalo, ungakwazi, aniyikwenza okomkhiwane kuphela imizwa yakhe.
12. Uma njalo ngifuna ukuhlangana nawe: eze disco efanayo ukuthi, noma inkampani yakho, bese unesithakazelo.
13. Uma ufuna ukwazi ukuthi ukuqonda ukuthi yini oyithandayo guys, ngo ukubukeka, zama ukubuka kuye ukuze abazange bakuqaphele. Uma wenza kanjalo-ke kuhle ngempela, uyokwenza ukubheka uma ungayiboni, futhi uma ubanjwe iso lakhe, ngokushesha uzothatha amehlo eceleni.
14. Uma ebheka wena kusukela ekhanda kuye ozwaneni, bese-ke ubonisa isithakazelo.
15. Uma umfana ayithande into, okuyinto yena ubheka (kule nto, yebo, wena), khona-ke abafundi bakhe osuke usuvulekile. Uma ubheka ngesisa futhi emaceleni elincane, kodwa emomotheka kamnandi, kuba uphawu ukubonakaliswa isithakazelo sakhe.
16. Uma ebheka wena nomlomo kancane evulekile - ke "fuse".
Indlela engcono indlela ukuthola ukuthi yini oyithandayo guys - ucele usizo. Uma bashiya konke ababekwenza beza kuwe bonke, wazi ukuthi wenze kuyabiza kakhulu.
Ngicabanga ukuthi ngemva kokufunda lesi sihloko, wena lula ukuphendula umbuzo kanjani ukuthola ukuthi yini oyithandayo amadoda. Nokho, akukho lutho kungaqinisekisa yalokho ephelele. Zama ukuzizwa isimo sakhe sengqondo futhi inhliziyo yakhe uzophumelela! Ngikufisela inhlahla!